WZX-Waa maxay sababta loo xidho taangiyada-qaabeeya ee aan xidhnayn ee sare ee cadaadiska jidhka?
WZX Wershada Dharka hoosaadka ee aan Xumaan lahayn / Taageerada Soo-saareha Dharka Dharka OEM / ODM / Jumlo Low MOQ Oder. Aqbal Summada Gaarka ah ee Gaarka ah / Logo.
Vr Dalxiiska Warshada
22% Spandex 78% Naylon
Bodysuit ee dharka
Taangiyada ugu Sarreysa ee Hooyada & Camisole
Labbiska Sibidhka Hooyada
Sare Gym-ka aan Xumaan lahayn
Leggings gaar ah
Wzx Wax soo saarka
Dharka hoose ee aan raad lahayn
Waa maxay sababta loo xidho taangiga dharka-qaabeeya ee aan fiicnayn?
Nayloondusha taangiga qaabka dharka oo leh neefsasho wanaagsan iyo saameyn qoyaan leh. Waxaa jira habab kala duwan oo ah taangiga taangiga, sida taangiga qaabka furan ee bustaha, jaakadaha qaabka wireless, jaakadaha qaabka leh ee hoosta iyo xargaha ballaaran, camisole ee haweenka qaabka dharka taangiga leh ee la dhisay iyo qaabab kala duwan ayaa u adeega ujeedooyin kala duwan.
Taangiga kore ee dharka aasaasiga ah waa gabal caadi ah oo furaha ah in la xidho lakab ama kaligiis.
Ma aha oo kaliya in taangiga dusha sare ee dharka lagu xidho keligiis, sida camisole maalinle ah, laakiin sidoo kale waa ka shaqeyn badan yahay jaakadda maalinlaha ah, dusha sare ee dharka kaas oo ka caawiya inuu simo kuuskuusan iyo qaabeynta sawirka dumarka
Haanta sare ee dharka qaabaysan waa xakamaynta caloosha waxayna qaabaysaa dhexda waxayna u fududaysaa dumarka inay xidhaan dharka dumarka moodada ah ee quruxda badan.
Dusha sare ee dharka raaxada leh ayaa si toos ah loo gashan karaa sidii camisole maalinle ah waxayna leedahay fidin 4-dhinac ah oo aad u fidsan oo aan xidhnayn.
Waxaa laga sameeyay naylon iyo spandex tayo sare leh, ma aha kuwo ciriiri ah xitaa kulaylka xagaaga.
Waxa kale oo aad dooran kartaa in aad ku habayso alaabta qaabka qaabaynta oo leh maro shaqaynaysa oo aad ku dartid maddooyinka dareenka qabow si aad u siiso alaabta qaabka qaabaynta xitaa dabeecad dheeraad ah.
Haddii aad rabto in dusha sare ee dharkaaga qaab-dhismeedka lagu xidho dhammaan xilli-xilliyeedka, waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa naylon iyo spandex iyo taangiga qaab-dhismeedka sidoo kale wuxuu noqon karaa dusha sare ee nigisyada kuleylka iyo sidoo kale qaabeynta jirka haweenka marka uu jiilaalku yimaado.
Dumarka qaabeeya cami oo leh rajabeeto leh suunka aan qodneyn
Soo saaraha WZX waa warshad ka timid Shiinaha oo taageerta habaynta dhammaan noocyada dharka qaabaynta. Waxaan soo saareynaa dharka sare ee qaabka tayada sare leh oo neefsan kara, raaxo leh, oo aad u fidsan.
Wixii macluumaad dheeraad ah fadlan nala soo xiriir
Soo saaraha dharka qaabka Dharka qaabka Camisole Warshada dharka qaabeeya Shapewear OEM ODM Taankiga dharka ee u qaabaysan Haweenka Jir-qaabeeya Taangiyada Sare Camisole oo qaabeeya jirka
KA HOR WZX Dharka niman kastuumo ee aan xumi lahayn
Sidee U Shaqeeyaa Dharka Shapear iyo Waa maxay sababta Shaper-ka Jidhka aan Xumaan lahayn uu u Wanagsan yahay? XIGTA
Dalxiiska Warshada VR
GANACSI WANAAGSAN OO WANAAGSAN LA TAABO
Wanzhanxing Apparel CO. LTD., 50 mitir galbeed ka xigta Wadada Gobolka 237, Magaalada Tongyu, Degmada Chaoyang, Magaalada Shantou